Apple waxay la wareegtay qayb ka mid ah saamigii Samsung ee South Korea | Wararka IPhone
Dhowr maalmood, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay ka dhigtay shirkaddii ugu horreysay ee rasmiga ah ee Apple Store inay heli karaan dhammaan Kuuriyada Koonfureed, si aysan mar dambe ugu baahnayn iibiyeyaasha idman ee iibso wax soo saar kasta oo Apple ah oo dalka ku jira.
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee ka imaaneysa Kuuriyada Koonfureed, Apple waxay kordhisay saamigeeda suuqa 3,3% marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay, halka Samsung waxay aragtay in saamigeeda suuqa uu 9% hoos u dhacay isla muddadii sanadkii hore.
Sida aan uga akhrisan karno BusinessKorea, ayagoo soo xiganaya xogta ka soo baxday Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda, Saamiga ay Apple hadda ku leedahay Kuuriyada Koonfureed waa 28,3%, oo wax yar uun ka hooseeya Samsung, yaa ku xoog badan suuqa saami dhan 55%. Shirkadda kale ee Kuuriya ee adduunka taleefanka, LG, waxay aragtay in saamigeedu sidoo kale u kordhay marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay, taasoo ka socota 8,3% ilaa 15,7%.
In kasta oo kororka aan la joojin karin ee LG ay muujisay ay khatar gelin karto saamiga suuqa ee Apple, haddana ma muuqato wax tilmaamaya in tani dhici doonto bilaha soo socda, gaar ahaan ka dib furitaanka Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee waddanka, kaas Waxay u oggolaan doontaa shirkadda ku taal Cupertino inay kordhiso booskeeda suuqa.
Inta badan kororka Apple ee iibka Kuuriyada Koonfureed waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in iibiyayaal badan iyo kuwa ka shaqeeya ay joogeen Waxay ku heleen qiimo jaban cutubyada iPhone 6 iyo iPhone 6s inay haysteen wixii ay awood u lahaayeen inay ka takhalusaan ka hor furitaanka Dukaankii ugu horreeyay ee Apple ee dalka laga furo.
LG, oo xilligan aan u muuqan inay leedahay fikrado aad u cad oo ku saabsan haddii ay bilaabeyso terminal cusub sanad walba, waa inay ikhtiraacaan si ay usii wadaan koritaanka inaad soo martay sanadkii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay la wareegtay qayb ka mid ah saamiga Samsung ee South Korea